Olee otú Bugharịa Photos si Igwefoto Roll ka Album | Nyefee foto Album
Oge ọ bụla m na-agbalị ịkpali a foto site igwefoto m Roll ọhụrụ album, nanị ihe ọ mbipụta ya. Na mgbe m na-agbalị ka ihichapụ foto ndị si m igwefoto Roll ebe ha na ndị ọzọ na album, nanị ihe ọ na-enye m nhọrọ ka ihichapụ ya n'ebe nile. Olee otú m naanị nwere ya na ndị dị iche iche album?
N'ezie, ebe a bụ abụọ ngwọta dị mfe. The ngwọta 1 na-agwa gị otú nyefee foto site na Igwefoto Roll ọzọ album enweghị ihe ọ bụla-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Ị nwere ike kpam kpam-eme ya n'ihi free na gị iPhone, iPod aka, na iPad. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ihichapụ photos na igwefoto Roll, otu photos na i depụtaghachiri ka album ga-ehichapụ. The ngwọta 2 na-enye gị ihe iTunes enyi, nke na-ahapụ ị na-akpali gị chọrọ foto site na Igwefoto Roll na gị iPhone, iPad na iPod aka ka ihe album mfe. Na ndị ọzọ ihe, ọ na-enyere gị ka ihichapụ photos na igwefoto Roll na-enweghị mmetụta na ndị na-album.
Ngwọta 1: Bugharịa foto site na Igwefoto Roll ka album na na gị iDevice
Ngwọta 2: Bugharịa foto ndị si Igwefoto Roll ka album na TunesGo Ochie
Ịkwaga Igwefoto Roll photos na album, ị nwere ike ozugbo ime ya na gị na iPhone, iPad na iPod aka. Soro nzọụkwụ n'okpuru.
Enweta "Photos" na gị na iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad. Họrọ ọba dịbunụ n'okpuru Photo Library. Ma ọ bụ i nwere ike ịmepụta a ọhụrụ album na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. N'elu nri akuku, pịa "Dezie". Ndị na-esonụ na ihuenyo, pịa "Tinye". Aha ọhụrụ gị album na pịa "Save". Mgbe ahụ, pịa "mere".
Mepee album na pịa akara ngosi n'elu nri akuku. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi anọ nhọrọ. Họrọ "Tinye". Ndị na-esonụ na ihuenyo, pịa "Igwefoto Roll" na-egosi foto niile ahụ ị dọọrọ. Gbadaa na ịhụ na ego gị chọrọ photos. Mgbe ahụ, pịa "Emela" n'elu nri akuku. Dị ka ị na-ahụ, foto na igwefoto Roll na-kwagara album. Nke ahụ bụ nkuzi na otú mbupụ Igwefoto Roll photos na album.
Cheta na: Jide n'aka na i nwere ike mgbe ihichapụ mbụ foto na igwefoto Roll. Ozugbo ị ihichapụ ha, otu photos na i kwagara album ga-ehichapu ya.
Wondershare TunesGo Ochie (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo Ochie (Mac) (n'ihi na Mac ọrụ) bụ a pụrụ iche iTunes enyi. Ọ na-eji jikwaa kọntaktị, foto, music, videos na SMS na gị iPhone, iPad na iPod aka.
Ma nsụgharị eme ka i nwee nyefee foto site na igwefoto Roll na-azọpụta ha na-album n'okpuru Photo Library. Na ndị ọzọ ihe, mgbe nyefe a mere, ị nwere ike ihichapụ mbụ foto na igwefoto Roll. The photos na album gaghị ewepụ.
Cheta na: TunesGo Ochie bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile Apple ngwaọrụ, gụnyere iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, iPod aka 5 na iPod aka 4. Pịa akwado Apple Devices iji nweta ihe Ama.
Aga m na-egosi gị otú ị mbupụ foto ndị si iPad / iPhone / iPod aka Igwefoto Roll na-azọpụta ha ọzọ album na Windows kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị kwesịrị ị na ibudata Mac version ma na-yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ na ngwaọrụ gị na PC mgbe na-agba ọsọ a usoro
Ná mmalite, na-agba a usoro na PC gị na mgbe wụnye ya. Jikọọ gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad gị na kọmputa site na eriri USB. Ozugbo gị iPad / iPhone / iPod aka jikọọ, a usoro ga-chọpụta ya ozugbo. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi isi window.
Nzọụkwụ 2. Paghaa foto ndị si Igwefoto Roll ka album
Mbupụ Igwefoto Roll photos ka album, nke mbụ niile, i kwesịrị mbupụ ndị a foto gị PC. Mgbe ahụ, mbubata ya azụ ọzọ album na gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad.
Pịa "Photos" taabụ, na hapụrụ kọlụm.
Ego igwefoto Roll na pịa "Export ka". Ma ọ bụ "Open" igwefoto Roll album ma họrọ gị chọrọ photos, wee pịa "Export ka".
Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, họrọ otu ọnọdụ ịzọpụta exported Igwefoto Roll album ma ọ bụ Igwefoto Roll photos.
Mgbe ahụ, Ka ibugharịa ihe oyiyi si Igwefoto Roll ọzọ album.
Pịa "Tinye" ike ọhụrụ album na gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad.
Mepee album. Wee pịa "Tinye" ọzọ.
Ịnyagharịa ka ọnọdụ ebe ị na-azọpụta igwefoto Roll album ma ọ bụ Igwefoto Roll photos.
Mbubata Igwefoto Roll ma ọ bụ foto ndị album.
Ị mere nke ọma! Ọ bụ otú ahụ banyere otú ịkwaga foto a dị iche iche album on iPhone, iPad na iPod aka. Ugbu a, ị nwere ike ihichapụ foto ndị a na igwefoto Roll onwe elu ohere. Mepee Igwefoto Roll, na họrọ photos na ị chọrọ ka ihichapụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ".
Mgbe nhichapụ, ị nwere ike ịlele album na ị na-azọpụta igwefoto Roll photos. The foto ndị ka e nwere. Ịtụnanya, ọ bụghị ya? E wezụga na, ma ọ bụrụ na ị ga-esi abụọ Apple ngwaọrụ, ị nwekwara ike mbupụ igwefoto Roll foto site na otu Apple ngwaọrụ ọzọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị furu efu gị iPhone, iPad na iPod aka Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library foto, na ị na-adịghị a ndabere, daa jụụ. Ị nwere ike mgbake foto ndị a na iPhone, iPad na iPod emetụ effortlessly.
The video nkuzi na otú ịkwaga foto site na Igwefoto Roll ọzọ album
> Resource> Igwefoto> Olee otú iji Bugharịa Photos si Igwefoto Roll ka Album